Turks neCaicos Islands zvakaburitsa Chiziviso cheNhanho 1 kubva kuCDC
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turks neCaicos Kupwanya Nhau » Turks neCaicos Islands zvakaburitsa Chiziviso cheNhanho 1 kubva kuCDC
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Turks neCaicos Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Kupfuura 65% yevakuru veko vabaiwa jekiseni, zvichiita kuti maTurks neCaicos Islands ive imwe yenyika dzisingabatwe nyika.
VaTurks neCaicos Islands vakagamuchira Alert Level 1 kubva kuCentre for Disease Control
Chiziviso chitsva chehutano hwekufamba chinomiririra chiitiko chakakura mumushandirapamwe wekudzivirira wekuTurks neCaicos Islands
Chiyero chakasimba chekudzivirira nyika chakabatanidzwa pamwe nekubudirira kwezvirongwa zvekuchengetedza zvakamisa kupararira kwe COVID-19
Turks neCaicos Islands Yevashanyi Bhodhi, iyo yakasarudzika yekushanya masimba kweTurks neCaicos Islands, yakazivisa kuti kwairi kuenda kwagashira Alert Level 1 kubva ku Nzvimbo dzeDaase Control (CDC). Chiziviso chitsva chehutano hwekufamba chinomiririra danho rakakura mumushandirapamwe wekudzivirira zvirwere weTurks neCaicos Islands, uyo wakatanga muna Ndira 2021 uye wakonzera zvinopfuura makumi matanhatu neshanu kubva muzana zvevanhu vakuru vanowana mukana mumwe chete wekudzivirira Pfizer-BioNTech - - kugadzira iyo ndeimwe yenyika dzakabayirwa zvakanyanya pasi rose.
Chiyero chakasimba chekudzivirira nyika chakabatanidzwa pamwe nekubudirira kwezvirongwa zvekuchengetedza chakamisa kupararira kwe COVID-19 uye chakabvumidzwa kufamba kwakachengeteka kwakachengeteka kuenda kuTurks neCaicos Islands. Iyo yekuenda yakafarikanya yakasimba yekugara mitengo mukati memwedzi mishoma yapfuura, kusanganisira avhareji yeinopfuura 70 muzana kugona kwaApril 2021.
"Tinodada kuti ruzhinji rwevanhu vedu vakabaiwa majekiseni, zvichitibatsira kuti tirambe takakombama uye tiwane Alert Level 1 kubva kuCDC kuitira kufamba zvakanaka kuTurks neCaicos Islands," akadaro Hon. Josephine Connolly, Gurukota rezveKushanya. "Tinotenda kune vatinokoshesa vemaindasitiri ezvekushanya nekutsigira kuedza kweTurks neCaicos Islands nekutanga mishandirapamwe yezvivakwa, nekumunharaunda nekungwarira kwavo kubayiwa majekiseni nekutevedzera mitemo. Isu tichiri kuda vafambi vekunze kuti vazivikanwe ne TCI Inovimbiswa, nzvimbo yedu yekuvimbiswa zvemhando yepamusoro, tisati tashanyira zviwi kuti tive nehupenyu hwemunhu wese. ”
Nhau dzeCDC's Alert Level 1 inosvika zvichitevera mishumo ichangoburwa neBazi rezvehutano neHuman Services yekuti huwandu hwevanhu makumi matanhatu nevashanu muzana hwevanhu vakuru vakagamuchira dosi yavo yekutanga yePfizer-BioNTech COVID-65 Vaccine. Pamusoro pezvo, zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvevanhu vakuru ikozvino vabaiwa zvizere vakagamuchira majekiseni maviri aya.
Aya manhamba ane simba anotaura nezvekubudirira kwechirongwa chekudzivirira chirwere chakatangwa neTurks neCaicos Islands Government, iyo yaisanganisira zvikwangwani zvinokurudzira majekiseni kuzviwi zvese; zvinokurudzira zvinobvumidza mabhizinesi nevashandi vakabaiwa zvakakwana kuti vashande munzvimbo dzakakwirira; uye matanho neanokosheswa emahotera, muresitorendi, nevashanyi vekushanya vanokurudzira vavanoshamwaridzana navo kuti vabaiwe jekiseni, zvinosanganisira zvinopihwa zvenguva dzose, kubatsira kuzvidzivirira pamwe nevamwe. Pamusoro pezvo, maTurks neCaicos Islands vakagara vachitsigira zvirongwa zvekuchengetedza pamwero unogamuchirwa pasi rese.
Pamusoro peChipiri 1 Chiziviso, veTurks neCaicos Islands vakagamuchira Safe Travels Stamp kubva kuWorld Travel Council, iyo inoratidza kuti zvirevo zviripo zvekuchengetedza zvinoenderana nezvinodiwa zvakanyanya zvakagadzwa neWTTC, pamwe nehurumende uye nyanzvi dzehutano, izvo zviri yakagadzirirwa kuenzanisa kufamba kwakachengeteka. Izvi zvinosanganisira, asi hazvina kuganhurirwa, kukurudzira kudzikama kwakakodzera kwemuviri, kumisikidza miganho yekugona, inoda masiki munzvimbo dzeruzhinji, uye kuona nzira dzakakodzera dzekugeza maoko nekuchenesa, pakati pezvimwe zvinodiwa zve'Kufamba Kwakachengeteka '.
Zvitsuwa zveTurks neCaicos zvakaramba zvakangwarira uye zvakagadzikana maererano nezvinodiwa nevashanyi vekunze, izvo zvakafanana kune vaccinic uye vasina-kubaiwa vafambi. TCI yenyika Inovimbiswa, inzvimbo yekuvimbiswa kwemhando yepamusoro paTurks neCaicos Islands Yevashanyi Webhusaiti webhusaiti, inopa mvumo yekufamba chete mushure mekunge vashanyi vapa humbowo hwezvakaipa COVID-19 PCR bvunzo kubva kunzvimbo inozivikanwa yehutano mukati memazuva mashanu vasati vasvika kwairi kuenda, humbowo hweinishuwarenzi yekurapa iyo inovhara COVID-19 yekurapa inoenderana nemitengo uye rakapedzeredzwa remibvunzo yekuongorora hutano. Nguva yemazuva gumi nemana yekuzvitsaura haidiwe kune vashanyi kana vaedza kusawana hutachiona.
Paunosvika kunhandare yendege, vashanyi vanogona kutarisira kupa kopi yavo TCI Inovimbiswa zvitupa kuvakuru vemunharaunda, vese vanopfeka zvekuzvidzivirira, vasati vaenderera mberi nekuenda kune dzimwe nyika uko tembiricha inotarisisa mufambi wega wega ichaitika. Pakusimuka, vafambi vazhinji vava kudiwa kuti vape humbowo hweyakaipa yeCOVID-19 bvunzo kuti vakwanise kudzokera kunyika yavo kwavakabva; mahotera mazhinji mhiri kwezvitsuwa izvozvi ave nenzvimbo dzekuyedza saiti, achibvumidza chiitiko chiri nyore uye chisina musono.
Zvitsuwa zveTurks neCaicos - musha kune “Gungwa Rakanakisisa Pasi Pose” - inzvimbo inokosheswa yezororo renyenyeri shanu yezororo rekushanya, bhizinesi, uye vashanyi vakakurumbira vanobva kutenderera pasirese. Iine zvitsuwa zvipfumbamwe zvakakura uye zviwi zvidiki makumi mana uye zvivakwa zvisina vanhu, nzvimbo yacho yakachengetedzeka pakufamba muparadigm nyowani yekumira kwepanyama, ichipa kukura kwayo, inoshamisa nharaunda yekunze, kuvanzika, nzvimbo dzekugara dzakakura, uye yakasarudzika portfolio yemisha inoshamisa yemisha uye zororo repachivande. Rondedzero yakawandisa yezvivakwa zveCOVID-40 zvekuyedza munzvimbo dzese dzeSista Islands dzinogona kuwanikwa pawebhusaiti yeBhodi Yevashanyi.